Aoi Bungaku Series – MMANIME
Created byAngo Sakaguchi, Natsume Sōseki, Osamu Dazai, Ryūnosuke Akutagawa
Synopsis of Aoi Bungaku Series
No Longer Human (Ningen Shikkaku)-
အထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်​ဖြစ်တဲ့ Oba Yozo ဟာ အထီးကျန်မှုကိုခံစားနေရပြီးရည်ရွယ်ချက်ပျောက်ဆုံးလို့နေခဲ့ပါတယ်
ဒီလိုနဲ့မျှော်လင့်ချက်ကုန်ဆုံးပြီး ရည်ရွယ်ချက်မဲ့နေတဲ့Oba Yozo ဟာ နှစ်အတော်ကြာအောင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာ,စိတ်ဓာတ်ကျတာ,မူးယစ်ဆေးသုံးတာ စတဲ့မကောင်းမှုသံသရာဝဲထဲမှာနစ်မွန်းနေခဲ့ပါတယ်
Chapter (4) ခုရှိပြီး တစ်ခုစီတိုင်းမှာ သူ့ဘဝရဲ့မတူညီတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေကိုဖော်ပြထားပြီး နောက်ဆုံး Chapter မှာတော့အရင်ကအတိုင်း အနှစ်သာရမရှိဗလာနတ္ထိဖြစ်နေတဲ့လူပျက်ဘဝပြန်ရောက်သွားပုံကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်
In the Forest,Under Cheeries in Full Bloom-
12 ရာစုကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့သူ့ကိုပြန်ပေးဆွဲသွားတဲ့ တောပုန်းဓားပြတို့ကြားကအချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်
ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ နတ်ဆိုးနဲ့ပန်းပုစရာ Phidias တို့ရဲ့ဂရိဂန္တဝင်ဇာတ်လမ်းကိုမှပြန်ပြီးပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်
ဒီဇာတ်ကားလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ “Run, Melos!” ရဲ့အဓိကဖော်ကျူးပြထားတာက ခိုင်မြဲတဲ့ Friendship ပဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
အခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုရင်ဆိုင်ရပေမယ့်လည်း Malos ဟာသူ့သူငယ်ချင်းရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရပုံကိုရိုက်ကူးဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
The Spider’s Thread-
ဗုဒ္ဓ Shakyamuni ဟာ အကြင်နာမရှိတဲ့ရာဇဝတ်သားတစ်ယောက်ငရဲကျနေတာကို အမှတ်မထင်သတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်
ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဟါ နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ရာဇဝတ်သားဟာ သူ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးအကြင်နာရှိတဲ့လုပ်ရပ်ဆိုလို့ တောထဲကပင့်ကူလေးတစ်ကောင်ကိုတက်မနင်းဘဲရှောင်သွားဖူးတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပဲရှိခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒိလိုကိုယ်ကျိုးမငဲ့ဘဲလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်လေးကိုထောက်ထားပြီး ဗုဒ္ဓဟါ ပင့်ကူလေးရဲ့ငွေရောင်ပိုးမျင်တစ်ခုကိုနိဗ္ဗာန်ဘုံကနေ ငရဲဆီချပေးခဲ့ပါတယ်
နာမည်ကြီးပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့Yoshihide ဟာဘုရင်​Horikawa ဆီကနေ “ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ငရဲ”ခံရပုံတွေကိုပန်းချီကားနဲ့သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲဖို့စေခိုင်းခံခဲ့ရပါတယ်
ဒါပေမယ့် Yoshihide ဟာသူကိုယ်တိုင်ငရဲကဘယ်လိုဆိုတာကိုမသိတာကြောင့်သရုပ်ဖော်ပန်းချီမဆွဲနိုင်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့အလုပ်သင်တွေကိုနှိပ်စပ်ပြီးငရဲခံ​​​နေ ရတဲ့မြင်ကွင်းပန်းချီကားကိုစိတ်ကူးပြီးရေးချယ်ပါတော့တယ်
ဒီလိုနဲ့ Yoshihide ရဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာရူးသွပ်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါထိခိုက်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ ငရဲခံနေရပုံတွေကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ပန်းချီကားတွေကိုရော သူပြီးမြောက်အောင်ဆွဲနိုင်ပါ့မလား? သူ့မိသားစုဝင်တွေကရောဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားကြမှာလဲ? စတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
Kokoro ကတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင် “နှလုံးသား”လို့အဓိပ္ပါယ်ရပြီး Light Novel ကိုတော့ Natsume Sōseki မှရေးသားပြီး 1914 မှာပထမဆုံးထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်
ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ ဂျပန် Meiji လူ့အဖွဲ့အစည်းကနေမှခေတ်သစ်တစ်ခုကိုအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းကလူငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ဆရာ (Sensei) လို့ခေါ်တဲ့သူကြားက Friendship တစ်ခုကိုဖော်ကျူးထားတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါ့အပြင် မိသားစုရဲ့အခန်းဏ္ဍ,တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းနဲ့ အဖွဲ့ရဲ့အရေးပါမှု,အားနည်းခြင်းရဲ့ရလဒ်စတာတွေကိုပါမြင်တွေ့နိုင်အောင်ဖော်ကျူးထားတဲ့ကားကောင်းလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်
ProductionAoi Bungaku Series Committee, Hakuhodo DY Media Partners, Happinet Pictures, Ltd., Madhouse, McRAY, Movic, MTI Co., Nippon Animation, Studio Amo, Threelight Holdings, Visionare
Firt air date2009-10-10
Last air date2009-12-26
Home PageAoi Bungaku Series
Quality articles is the important to invite the visitors to visit the site, that’s what this web site
not sure whether this publish is written by him as no one else recognize such exact approximately my difficulty.
Latonia Chiropractic says:
Gregorio VPN says:
BUy Natures Nutrition ACV says:
[Hentai] Sansha Mendan: Rensa Suru Chijoku Choukyou no Gakuen
[Hentai] Ane Koi: Suki Kirai Daisuki
[Hentai] Boku Dake no Hentai Kanojo The Animation